Shira Aaanaa Fantalletti Xaxamaa jiru! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShira Aaanaa Fantalletti Xaxamaa jiru!
Shira kana Adda durummaan kan xaxaa jiru Warshaa Buskuutii Brothers jedhamuu fi Mootummaadha. Warshichi Abbummaan kan Argobbaati. Bitamtoonni hawaasa qooduuf warshaa kanarraa mallaqni ramadameefii hojjechaa jiran angafoonni nama lama.
Namni kun hogganaa Waajjira Aanaa Fantallee duriiti. Amma Abukaatoo Warshaa buskuutii Brothers jedhamuuti. Gitni hojii isaa xabaqaadha. Yakka seenaa gurguddaa lama qaba.
#Tokkoffaan, Aanaa Fantaalletti Dhaabbata Guddinaa Tumsaa Faoundation (GTF) jedhamu kana dhala Karrayyuutiif mana barumsaa jaare, ija uummata hiree dhabee saaqe kan buqqise nama kana. Isin ABO dha je’ee Adamarra hanga Finfinnee caffee Oromiyaatti deemee kasasaa ture.
Dhaddacho Bara san Hogganaa Aanaa Fantaallee waan tureef Aangoo qabutti fayyadamee maqaa ABOtiin farrajee dhaaba hawaasa karrayyuu hiree barnootaa dhabeef carraa uume Wayyaanee fi OPDO wajjiin tahuudhaan Dhaaba kana achi keessaa baase.
Har’a Manneen Barnootaa Daandii Guddinaa lamaanuu dallaa horiit fakkaatu. Kanarratti OMN Documentary imimmaan nama boochiftu hojjetuun ni yaadatama.
1. Leensaa Guddinaa Tumsaa( Hoggantuu GTF)
2. Aster Guddinaa Tumsaa
3. Manguddoota biyyaa
Anis Mana barumsaa kanatti barachaa waanan tureef bareechetan beeka. Leensaa fi Aster Ilmaan Gooticha Oromoo Guddinaa Tumsaati.
#Lammaffaan Lafa Aanaa Fantaallee Malkaa Jiloo, Eddoo fi Qorkee mallatteessee Naannoo Amaaraa jala kan galche isa, Mallattoon kun dhoksaa hamaan qabamee jira. Manguddoon biyyaa ni beeku dubbii tana.
#Sadeessoo kunoo mallaqaan bitamee obboleeyyan lamaan walitti naquun dhiiga dhangalaasaa jira. Yakka seena lamaan qaburratti amma sadeeffate.
2. #Huseen_Boorrii. Guusa Dhaddachoo guutoti. Hawaasa maqaa ABOtiin mootummatti farraja. Mallaqa warshaa buskuutii brothers irraa ramadameen hawaasa adda qoodaa jira. Warshaa Diina Oromoo tahe kana gaarii godhee uummatatti dhaadheessa. Walitti bu’iinsa uumame maqaa jijjiiree Karrayyuun ABO dha. ABOtu nama fixaa jira je’ee waraanni mootummaa uummata akka goolu kan godhaa jiru nama kana. Kan Uummata Nagayaan waggoota dheeroo wajji jiraachaa jiru wal ficcisiisaa jiru jara kana. Kana Oromoon cufti dhagahuu qaba. Too’atamuus qabu.
Kaayyoon diinaa Aanaa Fantaallee keessatti hawaasa karrayyyuu jilbiiffachiisuudha. Kanaaf Argobbaan daangaa Naannoo Amaaraatti maxxantee jiraattu saamicha lafa daangaa Arroollee, Eddoo Xiqqoo fi Eddoo guddoo fudhachuuf mootummaa wajji wal tahuudhaan bitamtoota mallaqaan ramaddee uummatatti bobbaafte. Kana keessatti shoora olaanaa tapahachaa kaan jiru #Brothers Biscuit Factory’ dha.
Ergamtoonni diinaa kun maqaa Karrayyuu fi Itutiin hawaasa qooduuf shira xaxuu jalqaban. Anaan Fantaallee bakka lamatti bahuu qaba. Tokko Ituun tokko Karrayyuun yaamamuu qaba yookaanii immoo maqaan guutumaa guututti Ituun yaamamuu qaba jechuun manguddoo gurmeessanii iyyata Aanaarraa hanga Mootummaa olaanaatti galchan. Kana Mootummaan Naannoo Oromiyaatis ni beeka.
Gadaanis kopha kophaa haa taatu yaada jedhus fidan. Aanaa tokko keessatti Gadaan lama hin taatu mormii je’utu dhalate. Ituun Aanaa Fantantaallee keessa jiraattu sirna Gadaa qophatti dhaabbachuu qabdi yaada jedhu uumanii hawaasa keessa facaasan. Mootummaan immoo caphiinsa hawaasa kanaa waan jaalatuuf ajandaa argatetti fayyadamuun akka daranuu walitti diinoman haala mijeessuu jalqabe. Walitti bu’iinsi hawaasa lamaan jiddutti uumame hammaachaa dhufe. Lubbuun namaa ni baate. Manguddoon walitti baatee gumaa kafalanii araara buusanii cal’isan. Dubbiin diddeet hammaatte. Abbootin Gadaa Tuulamaa, Abbootin Gadaa Odaa Bultum, Abbootiin Gadaa Arsii dirmannaa taasisuun galtee galte gidduu seenanii araara buusan.
Qaamonni shira kana hojjetan immoo araara buufames haalanii ammas hawaasa walitti naqan. Karrayyuun guutumaan guututti ABOdha jedhanii kissii lammataa Mootummaatti galchan. Argobbaaf nafxanyaas hawaasa nagayatti kaasan. Lubbuu hedduus galaafatan. Karrayyuun hanga har’aa daangaa Oromiyaa roga saniin jiru dhiiga isaatiin eegsisee asiin gahe.
Karrayyuun duraan raakko qaama Alaa( external problem ) malee rakkoo keessaa (internal problem) hin qabu. Amma hawaasa kana cabsuuf rakkoo keessoo itti uumanii jiru. Walitti bu’iinsa uumameen lubbuu Oromoof Oromoo jiddutti baate lakkaahun nama jibbisiisa. Walitti bu’iinsi obboleeyyan lamaanii ammas hin dhaabbanne.
Hayyoonni Oromoo, Abbootin Gadaa fi Mootummaan Naannoo Oromiyaa hatattamaan Nagayaa fi tasgabbiin Aanaa kanatti akka bu’uuf qooda keessan akka baatan waamichi isiniif dhihaatee jira.
Via: Mohammed Fantaallee
OMN: Oduu Guyyaa (Mudde 23 ,2019)